Archive du 20201007
Rajoelina sy Ratsiraka Tsy mifankafoy noho ny amin-dRavalo…
Azo lazaina ho rano sy vary ka tsy mifankafoy ny Filoha teo aloha Amiraly Didier Ratsiraka sy ny Filoha ankehitriny Andry Rajoelina noho ny fananana fahavalo politika iombonana, dia i Marc Ravalomanana.
Fanaparam-pahefana Nidoboka am-ponja ny lehiben’ny fonja
Taorian’ny fanadihadian’ny Birao mahaleontena miady amin’ny kolikoly ao Mahajanga dia nidoboka am-ponja vonjimaika ny lehiben’ny fonja ao Ambatoboeny rehefa nanome baiko momba izany ny avy eo anivon’ny tribonaly misahana ny ady voalohany ao Mahajanga ny 1 oktobra teo.
Teny mahery anaty facebook Azo itarafana fa krizy ny Malagasy
Efa tena henjana ny fifandranitana sy fifanompana anaty tambajotra serasera “facebook” amin'izao.
Morondava Lehilahy 19 taona nanolana zaza 11 taona
Mirongatra hatrany ny fanolanana zaza amam-behivavy eto amintsika. Zazavavy kely iray vao 11 taona monja indray no naolana tovolahy iray efa 19 taona tany amin’ny distrikan’i Morondava.
Polisy ao Alasora Nahazo fanampiana amin’ny fidiran’ny mpianatra
Zanaka polisy miasa ao amin’ny kaomisarian’Alasora miisa 90 no notolorana tohana fanabezana na “aide scolaire” ho fanamaivanana ny fidiran’ny mpianatra.
Haino aman-jery Miverina ny antso an-telefaonina
Mbola ao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana isika, mitohy ny « réquisition » ho an’ny haino aman-jery rehetra.
Jamba rehefa tombotsoa iraisina Mailaka rehefa handrahona ny Ministeran’ny serasera
Maro ny mpanao gazety manana olana amin’ny fananana ny karatra maha matihaninana izay miteraka olana amin’ny fanatanterahana ny asa, hoy ny Tale Jeneralin’ny Serasera mpisolo toerana Atoa Mamimbahoaka Fetra Niaina.
Fahagagana sa fampiesonana ?
Hatao ao anatin’ny dimy taona ny tsy vitan’ny mpitondra nifenesy tao anatin’ny 60 taona araka ny fomba firesaky ny Filoham-pirenena matetika.
Loza ateraky ny moto Nahafaty olona 15 tao anatin’ny 3 volana
Mitombo isa hatrany ireo loza ateraky ny kodiaran-droa na ny moto eto amintsika. Raha araka ny fantatra mantsy dia nahatratra 39 isa izany tao anatin’ny 3 volana raha mitotaly 55 kosa ny lozam-pifamoivoizana tamin’ny ankapobeny.
Mizana tsindrian’ila eto Iarivo Hatao hazalambo ny moto, gaboraraka ny sarety
Mafotaka ny fanenjehana ireo fitaovam-pitaterana tsy ara-dalàna ara-taratasy eto Antananarivo amin’izao fotoana izao.
Fifamoivoizana Ahiana ho tapaka ny RN 6
Sintonina amin’ny traktera ny fiara sasany izay vao afaka. Misy ny atosika. Izany no zava-misy eo Ambalafaminty, eo anelanelan’Antsohihy sy Port Bergé, raha tsy hilaza afa-tsy santionany amin’ny faharatsian-dalana amin’iny lalam-pirenena faha 6 (RN 6) iny.
Faritra Itasy Nahazo fampitandrena ny orinasa mpanao lalana
Nidina ifotony nijery ny fandroson'ny fanamboarana ny lalana mampitohy an'i Miarinarivo - Manazary - Amboniaza ny Governoran'ny Faritra Itasy omaly ary nahita maso ny fitarozahan'ny asa sy ny tsy fanajana ny teny nifanomezana nataon'ny tompon'ny orinasa izay miandraikitra ny asa.
Ambatondrazaka Mitokona ireo mpampianatry ny lisea teknika
Raikitra ny fitokonana ataon'ireo mpampianatra ao amin'ny lisea teknika ao Ambatondrazaka omaly.
SEMPAMA Sofia “Mila jerena ny hasina maha mpanabe”
Ny 05 oktobra no andro maneran-tany ho an'ny mpampianatra mpanabe. Nanamarika izany ihany koa ny Kaonfederasionina Sendikaly SEMPAMA any amin`ny Faritra Sofia.
EPP Antandrokomby Mitaraina ny Ray aman-dReny fa mandoa vola
Raha efa nampahafantarina tamim-pomba ôfisialy fa tsy mandoa sara-pisoratana anarana intsony manomboka amin’ity taom-pianarana vaovao ity ireo mpianatra manovo fahalalana eny anivon’ny sekolim-panjakana dia mbola misy ihany ireo manao izany.
Mpampianatra nampanantenaina tao Toamasina Velom-panontaniana, 5 volana aty aoriana
Velom-panontaniana ankehitriny ireo mpampianatra FRAM nampanantenain’ny filoham-pirenena, Andry Rajoelina, ho raisina mpiasam-panjakana ao amin’ny EPP Maurice Guyot Toamasina.
Bejofo Ambatondrazaka Avotra ilay tovovavy nataon'ny jiolahy takalon’aina
Avotra soamantsara ilay tovovavy 22 taona nataon'ny andian-jiolahy, mitam-piadiana takalon'aina nanafika tao Anandrobe kaominina ambanivohitra Bejofo distrik’ Ambatondrazaka ny alin’ny 05 Oktobra teo.
Hala-botry Lehilahy 4 tratra teny 67 ha
Lehilahy 4 mpanao hala-botry no tratran’ny fokonolona teny amin’iny faritry 67 ha iny ny faran’ny herinandro teo.
Ampasambazaha Fianarantsoa Nokapainy tamin’ny antsy ny tanan’ilay vehivavy
Mirongatra ny tsy fandriampahalemana eto amintsika. Kioska iray no nisy nanafika afak’omaly hariva tao Ampasambazaha Fianarantsoa.
Roland Garros Nisy lalao namboarina
Nisokatra ny fanadihadiana mombana kolikoky avo lenta eo amin`ny sehatry ny fanatanjahan-tena (corruption sportive active et passive), araka ny nambaran` ireo haino aman-jery vahiny mahakasika ny fifaninana Roland Garros,
Amoron`i Mania Kaominina 30 no hisitraka rano fisotro madio
Nihaona tamin` ny Lehiben'ny Faritra Amoron'i Mania ny mpandrindra ara-paritra amin` ny CARE-Rano WASH Rajaona Herizo.
Sambava Silipom-behivavy maro no tratra teny aminy
Omaly, tokony tamin` ny 02 ora maraina, dia ilay lehilahy iray milaza fa hamonjy fodiana no tratran` ny fisavana nandritra ny fisafoana nataon'ireo Andrimasom-pokonolona tao Ambalamanasy-Antanifotsy II distrikan` I Sambava.
Faritra Itasy Miatrika fiofanana ireo tanora tsy an'asa
Tanora tsy an'asa miisa 697 any amin'ny Faritra Itasy no nisitraka fampiofanana fohy ezaka nanomboka omaly.
Fihariana - Androy Tantsaha 185 no nisitra famatsiana ara-bola
Toho-drano ao Ambohijoky Tsy niandry fanjakana intsony ny mponina
Toy ny antso an’efitra ihany raha izay no ilazana azy ny antso nataon’ireo mponina ao amin’ny kaominina ambanivohitra Antanety Ambohijoky tamin’ny fanjakana mikasika ny tokony hijerena haingana ny asa fanamboarana ny toho-drano ao Ambatomainty izay manondraka velaran-tany an’arivony ha ao
Coronavirus 31 ireo tranga avy any ivelany
Iray no namoy ny ainy tany amin’ny Faritra Sava, ka nampiakatra ny lavon’ny coronavirus hatrizay ho 234.